Hamro Yatra | » कोरोना नियन्त्रणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल कोरोना नियन्त्रणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल – Hamro Yatra
> कोरोना नियन्त्रणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल
२८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारका कामसंग आफु सन्तुष्ठ रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “कोरोना यस सरकारको कमजोरीका कारण आएको होइन । विश्वव्यापी रुपमा आएको छ । प्रभावकारी ढंगले सामना गरिरहेको छ । भुटान बाहेक अरु देशको तुलनामा नेपालको राम्रो छ । विश्वव्यापी महामारीको सामाना प्रभावकारी ढंगले गरिरहेको छ ÷गर्ने छ । कोरोनाबाट देशलाई मुक्त गर्छ । सरकारले अघि सारेको दृष्टिकोण, हासिल गरेका उपलब्धि कुन चाही कुरामा असन्तुष्ठ हुनुपर्ने छ ? कोरोनाका कारण उत्पादन वृद्धि दर हासिल भएन, यो सरकारको कमजोरी हो र ? यसलाई आलोचना गर्ने विषय पाईयो भन्ने हो ?”